Nhau - Upfu hwokugaya
Hupfu chigayo michina sikuruwa conveyor
Mune zvigayo zveupfu, zvinofambisa sefa zvinowanzoshandiswa kuendesa zvinhu. Ivo vari kuendesa michina inovimba nekutenderera kutenderera kuti isundire hombe zvinhu zvekutenderera kufamba kana kuteedzera kufambisa.
TLSS yakateedzana sikuruu yekuendesa ine hunhu hweyakareruka mamiriro, compact, kuvimbika mashandiro, nyore kugadzirisa, kusimbisa zvakanaka, inogona kupihwa chikafu kana kuburutswa pamusoro payo yese kushanda kureba, uye inogona kutakurwa munzira mbiri mukaseji imwechete. Inokodzera kuendesa hupfu hwezvinhu uye granular zvinhu.
TLSS yakateedzana sikuruu conveyor inowanzo sanganisira screw shaft, muchina slot, yakaturika inobereka uye yekufambisa kifaa. Iyo yemuviri inonaya yakasungwa nemhepo inodzika uye mandrel. Inoshingaira hutachiwana mugodhi iri musono simbi chubhu. Iyo yekuratidzira kureba inogona kumisikidzwa zvinoenderana nekutsvaga.
Impact Detacher muchina weupfu chigayo
Iyo FSLZ yakateedzana Impact Detacher inonyanya kushandiswa seyekuwedzera michina yekuwedzera muupfu kusanganisa system kukanganisa izvo zvinhu kusunungura hupfu uye nekunyatso kuwedzera iyo sieving chiyero.
Muchina uyu unonyanya kuverengerwa ne feed inlet, stator disk, rotor disk, casing, mota uye zvimwe zvikamu. Iyo yekubuditsa yakaiswa mune tangential nzira yeiyo casing uye yakabatana kune pneumatic irikupa pombi. Izvo zvinhu zvinopinda zvichibva pakati penzvimbo yemuchina uye zvinowira pane iyo- inomhanya inotenderera rotor diski. Nekuda kwesimba re centrifugal, izvo zvinhu zvine chisimba pakati pe stator nepini ye rotor. Mushure mekukanganisa, inokandwa kumadziro egobvu, mafuru anotsemuka nekuda kwesimba rakasimba, ndokumwayiwa nemhepo kuyerera muhombodo kuenda pachiteshi chekubuda kupedzisa hupfu hwunosunungura maitiro.
Anonatsa muFurawa chigayo
Munatsi chinhu chakakosha muchishandiswa cheupfu. Iyo inoshandisa chiito chakabatanidzwa chekusiya uye kuyerera kwemhepo kuongorora furawa.
Chidimbu chekudyisa chinoshandisa kudengenyeka kwechigadzirwa chekudyisa kuti icho chinyorwa chivhare iyo yakazara chidzitiro upamhi. Kuvimba nekuzungunuka kwemuviri wechidzitiro, izvo zvinhu zviri kuenda kumberi uye zvakapfava kuburikidza nechiso chepamusoro uye chakaparadzirwa pane matatu-masitendi skrini. Pasi pechiitiko chakabatanidzwa chekudengenyeka uye kuyerera kwemhepo, izvo zvinhu zvinomisikidzwa uye zvakapetwa zvinoenderana nehukuru hwakasiyana hwehukuru, giravhiti yakatarwa uye kumhanyisa kumhanya.
Pakati peiyo furawa yekuchenesa, yakashata mweya inoyerera ichipfuura nepakati pezvinhu zvakasara, ichisveta marara ehuremu hwakadzikira, zvidimbu zvakakura zvinosundirwa kumberi kumuswe wechidzitiro, zvidimbu zvidiki zvinowira kuburikidza nechiratidziri, uye izvo zvinhu kupfuura nepakati pechidzitiro kunounganidzwa Mune inoendesa tangi, izvo zvinhu zvakasiyana izvo zvinowedzeredzwa zvichipfuura nemukati wekuburitsa tangi uye izvo zvinoburitsa bhokisi, uye zvinosunungurwa zvinoenderana nezvinodiwa muitiro.